Xusuusnow wax walbana waa u suurtagal kuwa rumaysta. - Gail Devers - xigasho Pedia
Xusuusnow wax walbana waa u suurtagal kuwa rumaysta. - Gail Devers
Is-aaminaadda asal ahaan waxay ka dhigan tahay isku kalsoonaanta naftaada. Waa muhiim inaad naftaada aaminto iyo hawsha aad qabaneyso, kaliya markaa waad u kici kartaa inaad guuleysato oo aad ku faraxdo. Is-aaminaadu waa furaha ugu weyn ee guusha. Markaad naftaada aaminto, waad iska dhaafi kartaa cabsida guuldarada. Haddii aad ka maqantahay iimaanka iyo aaminaada, waxad ku dhiman doontaa ficil, oo markaa, ma helaysid waxyaabo kugu filan oo aad naftaada u istaagto.
Dadka aan naftooda aaminin waxay aakhirka u weynaan doonaan kalsoonida ay ku qabanayaan wax, sidaas darteedna waxay u muuqdaan inay caqabaddoodu aad u hooseyso. Dadka aan naftooda aamineyn waxay aakhirka lahaan doonaan isku-qiimo hooseyn sidaas darteedna kalsooni darro ayey ku dhici doonaan. Sidaa darteed, ma awoodi doonaan inay ku guuleystaan ​​inta karaankooda ah oo horay u socdaan.
Ma jiro wax la yiraahdo 'wax aan macquul aheyn'. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad naftaada aaminto, oo aad hubto inaad ku guuleysato wax walba oo aad ka fikireyso! Is-aqbalaadu waa mid aad muhiim u ah. Markaad karti u yeelato inaad aragto qiimahaaga, waxaad awood u yeelan doontaa inaad naftaada ku aaminaan.
Qofka aqbala xaqiiqada ah inuu ku socdo jidka saxda ah wuxuu aakhirka heli doonaa waddo uu ku gaadho halka loo socdo. Taas bedelkeeda, hadaad hubin naftaada, waxaad ku sugnaan doontaa dhibaato haddii aad ku socoto wado sax ah iyo in kale.
Xigashooyin macquul ah
Riyooyinkaaga sii noolow. Fahamka si loo gaaro waxkasta waxay u baahan tahay caqiido iyo aaminaad naftaada, araga, shaqo adag, go'aan, iyo u heellan. - Gail Devers
Riyooyinku waxay kuu horseedi karaan hanashada. Qofka aan weligii riyoon weligiis ma gaadhi doono meel kasta…